" ကမ်းခြေ အလွမ်းမပြေ ခေါင်းလောင်းပန်းတစ္ဆေ "
” ကမ်းခြေ အလွမ်းမပြေ ခေါင်းလောင်းပန်းတစ္ဆေ “
အတွေ့အကြုံတစ်ခုလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်..အဲ့ဒါကဘာလည်းဆိုတော့သရဲခြောက်ခံရတာပေါ့နော် ကျမ ၆တန်း၊၇တန်း နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် တစ်နှစ်နှစ်ပဲ..သေချာတော့မမှတ်မိတော့ဘူး ခုနှစ်ကို.. ကျမအမေကငွေဆောင်ကဟော်တယ်မှာတာဝန်ကျတာပေါ့နော်..နာမည်တော့ပြောပြတော့ဖူး ပုံတော့ပေးလိုက်မယ်ရှာလို့ရသလောက်.. (သွားရင်ကို့ဘာသာရအောင်ရှာ)
ကျမလည်းနွေရာသီကျောင်းသုံးလပိတ်လို့ အမေ့ဆီကိုအလည်သွားတာပေါ့ အဲ့မှာ၂လလောက်နေခဲ့ပါတယ်..အဲ့တော့ကျမလည်းအမေ့လက်အောက်ကတပည့်တွေ အမေ့သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ဟော်တယ်လုံးနဲ့ရင်းနှီးနေတာပေါ့..၀န်ထမ်းလေးတွေကလည်းအားလပ်ချိန်ဆိုကျမနဲ့ဆော့ဆော့ပေးပါတယ် ဟော်တယ်တစ်ခုလုံးကိုပတ်ပီးလျောက်ဆော့တာ..
ဟော်တယ်ရဲ့ဘန်ဂလိုလေးတွေကရှေ့ရောနောက်ရောတံခါးပေါက်နဲ့ ကော်ရစ်ဒါလေးပါပါတယ်..တစ်ထပ်အဆောက်အဦးလေးပါပဲ..ဟော်တယ်ရဲ့အဓိက Bar,Reception,Business Centre ကအမိုးကြီး ကြီးအောက်မှာတစ်ခုတည်းဆောက်ထားတာပါ..မျက်လုံးထဲမြင်အောင်ပြောရရင်… ၀င်ဝင်ချင်း ဘယ်မှာ Reception ညာမှာBusiness Centre ဆက်သွားရင် Bar ပီးရင်း ဧည့်သည်တွေအတွက် ခုံတွေကိုတောက်လျောက်ရေကူးကန်အထိခင်းကျင်းထားပါတယ်.. အဲ့Bar နားလောက်ကနေစပီး ရေကူးကန်မတိုင်ခင်အထိကို အပေါ်တစ်ထပ် ဆည်းဆာView အနေနဲ့ဆောက်ထားပါတယ်..
အဲ့အပေါ်ထပ်မှာတော့ထိုင်ခုံလေးတွေ ပန်းအိုးအလှလေးတွေနဲ့ညနေဆိုလှလို့ပလို့ ညဆိုကြောက်စရာပေါ့ အဲ့ဆည်းဆာ View ရဲ့ ပင်လယ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူရင် ညာဘက် အလယ်နားမှာ အုန်းပင်လားထန်းပင်လားမခွဲတတ်ဘူး တော်တော်ရှည်ပါတယ်တခြားအပင်တွေနဲ့မတူအောင် အနည်းငယ်ပိုရှည်ပါတယ်..ပြောသံကြားတာကတော့ အဲ့အပင်မှာတစ္ဆေရှိပါတယ်ဆိုလားပဲ..ကိုကတော့ပျော်ပျော်ပဲ ကလေးဆိုတော့ဘာမှဂရုမစိုက်မိပါဘူး ဒီလိုပဲအမှတ်မထင်ကြားမိတာပါ.. အဲ့ထန်းပင်ရဲ့ဘေးမှာ မာစက် (Massage) ရှိပါတယ်..တကယ့်ကပ်ရပ်ကလေးပါပဲ..အဲ့မှာလည်း သရဲခြောက်တယ်တဲ့ ၀န်ထမ်းအမတွေပြောသံကြားမိတာပါ.. ဒီလိုနဲ့တစ်ရက်ပေါ့..ကျမလည်းရေကူးကန်နားမှာရေကူးကန်ဆေးတဲ့သူ(ဘယ်လိုပြောရမလဲ..ရာထူးလဲမပြောတတ်ဘူး..အဲ့အစ်ကိုက ရေကူးကန်ထဲကအမှိုက်တွေရေကူးကန်ဘေးတွေသန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်)…
အဲ့လူကပေါ့ ရေကူးကန်ဆေးနေတာ ကျမနဲ့ဆော့ပီးစကားပြောရင်းပေါ့..အချိန်က ညနေမှောင်ရီပျိူးစ ၆း၃၀လောက်ဖြစ်မယ်..အဲ့အစ်ကိုကကျမကိုစတာပေါ့ရေကန်ထဲတွန်းချလိုက်မယ်ဘာညာနဲ့ ကျမလည်း တူတူပုန်းတိုင်းဆော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာ..အဲ့အစ်ကိုကသူဒီဟာပီးရင်အားပီတဲ့ ခနနေအုံးတဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်း ဟိုရစ်သီရစ်သီဒီရစ်သီရစ်သီနဲ့စောင့်နေတာပေါ့ရေကူးကန်ဘေးမှာ ကလေးဆိုတော့ဂနာမငြိမ်အဲ့နားကနေဟိုသွား ဟိုကနေဒီသွားနဲ့အဲ့နားတစ်ဝိုက်မှာ..
ကျမလည်းရေကူးကန်နားပြန်ရောက်လာတော့ အဲ့အစ်ကိုကခနလေး အပေါ်ကိုပန်းအိုးသွားရွှေ့လိုက်အုံးမယ်ဆိုပီး တက်သွားတာ ကျမလည်းလိုက်သွားတယ်.. ဒါနဲ့လှေခါးကဘယ်ဘက် ရှေ့နောက်ပေါင်း ၂ခုရှိတယ်..ရှေ့ကနေတက်ပီးအနောက်ကနေကျမတို့ပြန်ဆင်းတာပေါ့..အဲ့အနောက်ကနေဆင်းရင် Kitchen တံခါးဝကိုတည့်တည့်ပဲ.. အဲ့ကနေမှဘယ်ကိုသွားရင်Bar ကိုပြန်ဝင်တဲ့အပေါက် ညာက ဘန်ဂလိုတွေကိုဦးတည်နေတဲ့လမ်းလေးပေါ့.. ၂ယောက်သားဆင်းလားပီး အဲ့Kitchen အ၀မှာပဲ Kitchen ကလူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်..သူတို့ကကျမကိုတွေ့တော့စတာပေါ့ ဟိတ်ကောင်မလေး နင်ဘာလို့သူနဲ့အဲ့အပေါ်လိုက်သွားတာလည်း..အဲ့အပေါ်မှာသရဲခြောက်တယ် မကြောက်ဖူးလားဘာညာနဲ့ ကျမကလည်း စကားပြန်ပြော စကားကောင်းနေတုန်း ရေကူးကန်ဆေးတဲ့အစ်ကိုက Bar ဘက်ဝင်သွားပါတယ်.. ကျမစိတ်ထင်တော့သူပီးရင်ပြန်လာမယ်ပေါ့..အဲ့နားမှာပဲစောင့်နေတာ Kitchen အ၀မှာ.. အဲ့ပန်းခြံတွေထဲမှာ စက်ကူပန်း(တစ်နည်းအားဖြင့်မသာပန်း)လို့လည်းခေါ်ကြတယ်..
အဲ့ပန်းအိုးတွေရှိတယ်..အဲ့ပန်းကပန်းခရမ်းရောင်အိုးပေါ့နော်.. လှေခါးအဆင်းဆင်းဆင်းခြင်းဘေးမှာ Decoration လှအောင်ချထားတယ် နည်းနည်းအလတ်စားဆိုဒ်လောက်..တခြားနေရာတွေမှာလည်းအရောင်စုံပဲရှိပါတယ်… ကျမကလည်းညဘက်ကြီးကိုယောင်ပီးအဲ့ပန်းကိုသွားခူးပီးပန်းတွေကိုကျမခေါင်းပေါ်ကိုကြဲတိုင်းဆော့နေတာ ဟိဟိ Kitchen ကလူနှစ်ယောက်ကလည်းအထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ် ကျမကလည်း ပန်းခူးတာတောင်လူလိုမခူးဘူး မျောက်လိုပဲ လှေခါးရဲ့သုံးပုံ ပုံတစ်ပုံလောက်ကနေပီးခူးပီး ပန်းမင်းသမီးအလုပ်ကောင်းနေတုန်း အဲ့အပေါ်ကနေ ကျောက်စရစ်ခဲနဲ့ပေါက်တာ (အမလေးပြောရင်းကြက်သီးတောင်ထတယ်..ပြန်တွေးပီးရေးနေတဲ့အချိန်လည်းကြည့်အုံးလေ ၁၁း၅၅တဲ့ )
ပထမတစ်လုံး..နည်းနည်းကြောင်သွားတယ်..အံမယ်..ငါ့ကိုရန်စတယ်ပေါ့..ဟိုအစ်ကိုပဲထင်ပီး..တွေ့မယ်ပီးမှဆိုပီးနေနေပီးပန်းတွေနဲ့ထပ်ဆော့…. ဒုတယတစ်လုံး..သေတော့မယ် ငါ့ကိုတူတူပုန်းတမ်းဆော့မယ်ဆိုပီး အပေါ်ကနေပုန်းပီးခဲနဲ့များပေါက်ရလားဆိုပီး ထပ်နေနေသေးတယ် တတိယတစ်လုံးမှာ ၂လုံးဆက်တိုက်ပေါက်တာတော့..၃လုံးမြောက်အလုံးကကျမနောက်စေ့ကိုမှန်သွားတယ် ကျမတော်တော်စိတ်တိုသွားတယ်..ခေါင်းထိအောင်များပေါက်ရလားဆိုပီး ကျမအဲ့ကျောက်စရစ်ခဲ၎လုံးကိုကောက်တစ်ဖက်လက်ကကိုင် နောက်လက်တဖက်က မသာပန်းတွေကိုကိုင်ပီး တွေ့မယ်ဆိုပီး အပေါ်ကိုတက်သွားတာစိတ်တိုတိုနဲ့ အပေါ်လည်းရောက်ရော..ကျမတွေ့လိုက်တာက ဘာမှမရှိပါဘူးလို့ အပေါ်မှာမျက်လုံးကစားလိုက်တာ..တကယ်ပါ..
နေရာကလည်းရှင်းနေတာပဲလူဆိုတာကလည်းဘာမှမရှိဖူး ကျမကပန်းအိုးနဲ့ကွယ်ပီးများပုန်းနေလားဆိုပီး အရှေ့လှေခါးရဲ့ဒေါင့်ကနေ ပန်းအိုးနားကိုကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဖူး..အဲ့ချိန်ထိသရဲခြောက်ခံရတယ်လို့လည်းမထင်မိဖူး.. ငါ့ကိုခဲနဲ့ပေါက်ပီး ငါတက်လာမြင်လို့ အရှေ့လှေခါးကနေ ဒင်းပြေးဆင်းသွားတာနေမှာဆိုပီး အရှေ့လှေခါးနေဆင်းပီး ကျမ Bar ကိုသွားမေးတယ်.. ရေကူးကန်ဆေးတဲ့အဲ့လူရောလို့ဘယ်မှာလည်းလို့ သမီးနဲ့ဆော့ဖို့ပြောပီးစောင့်နေတာ ဘယ်ရောက်သွားလည်းဆိုတော့…. ပြန်ဖြေလိုက်တာက..ခုနကပဲသမီးနဲ့တူတူဆင်းလာပီးမန်နေဂျာကLaundryကိုဘာသွားပို့ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုလား..ခနစောင့်နေပြန်လာလိမ့်မယ်တဲ့….
အဲ့မှာစတွေ့တာပဲသေရော..အဲ့ဒါနဲ့ကျမကလည်းလက်ထဲကနေကိုင်လာတဲ့ကျောက်စရစ်လေးလုံးကိုပြပီး ဒီမှာကျမကိုအဲ့အပေါ်ကနေပေါက်တယ်ပေါ့..အဲ့လူမဟုတ်ဖူးလား..သမီးကိုမနောက်နဲ့နော်လို့ပြောတာ..ဟာ နင်တော့သရဲခြောက်ခံလိုက်ရပီတဲ့ အဲ့အစ်ကိုကခုနတည်းကသွားတာမယုံ Reception ကအမတွေကိုသွားမေးလိုက်တဲ့ သူအဲ့ဘက်ကိုဝင်ပီးမှသွားတာတဲ့..
ကျမလည်းနည်းနည်းဖြုံသွားတယ်..ကျမလည်းအဲ့ဒါကိုအမှတ်မရှိသေးဖူး အဲ့ခဲလုံးတွေကိုမှတ်မှတ်ရရ အခန်းထဲထိသယ်လာပီး ကျမခရုတွေကောက်ပီးစုထားတယ် ပလတ်စတစ်အိပ်ထဲထည့်သိမ်းလိုက်တယ် တကယ်တကယ်အကြောက်လန့်မရှိတာ.. လူကပဲကံမြင့်နေလို့လားမသိဖူး လူလုံးလိုက်မမြင်ရတာကံကောင်း.. ကျမလည်း နေ့ဘက်လောက်ကလွဲရင်အဲ့အပေါ်ကိုတယောက်တည်းဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူး.. ကျမ ပြန်ခါနီးအမေ့ဆီကပြောသံကြားရတာတော့..
ဒီလို………………. ဧည့်သည်တွေ Taiwan လူမျိုး စုံတွဲတွေ ၇၊၈တွဲလောက်ရှိမယ် လာတည်းတာ.. ကျမတောင်မြင်လိုက်ပါသေးတယ် အဲ့အတွဲတွေ ရေကူးကန်ထဲမှာစပ်စလူးခါနေကြတာ လာတည်းပီးသိပ်မကြာဖူး ည၁နာရီနောက်ပိုင်းပဲ အချိန်တော့သေချာမမှတ်မိဖူး.. သူတို့အတွဲတွေတည်းကတစ်ယောက်က ညဘိုက်ဆာလို့ဆိုပီး Bar ကိုသွားမှာမယ်ဆိုပီးအဲ့လူက တစ်ယောက်တည်းထွက်လာတာ..ဘီယာသောက်ထားတဲ့အရှိန်လေးကနည်းနည်းရှိတယ်တဲ့.. အဲ့လူကဘာမှာလည်းမသိဖူး သူက ဆည်းဆာ view အပေါ်ထပ်မှာလှေညှင်းခံရင်းစောင့်မယ်ဆိုပီးတစ်ယောက်တည်းတက်သွားပီး အဲ့ကထိုင်ခုံရှည်မှာထိုင်နေတာတဲ့ ထိုင်နေတဲ့ပုံစံကလည်း ခြေထောက်ကိုချိတ်ပီး ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်တန်းပီးတင်ထားတာ..
အဲ့ချိန်မှာ သူ့ဘေးနားကိုမိန်းမတစ် ယောက်လာထိုင်တာတဲ့ အဲ့လူကလည်း သူ့အခန်းထဲက မဒီလေးကသူတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ လိုက်လာတယ်ထင်ပီ ပုခုံးဖက်လိုက်တာတဲ့ လူကလည်းနည်းနည်းမူးနေတဲ့အရှိန် မီးရောင်ကလည်း အဲ့လောက်မကောင်း(အောက်ကပုံမှာပြထားပါတယ်) ဆိုတော့ မျက်နှာကိုသတိမထားမိလိုက်ဖူးတဲ့ ..ဆင်းခါနီးကျမှသူကသွားမယ်လာဆိုပီးလက်ဆွဲအခေါ် မျက်နှာကသူ့မဒီလေးလည်းမဟုတ်ဖူး ကြောက်စရာကြီး ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပဲတဲ့.. သူလည်းလန့်ပီးအောက်ကိုချက်ချင်းဆင်းပြေး Kitchen ကလူတွေကိုပြေးပြော အဲ့လူခမျာတစ်ယောက်တည်းမပြန်ရဲရှာလို့ Bar က၃ယောက်လောက်ကပြန်လိုက်ပို့လိုက်ရပီး အစားတောင်မစားနိုင်တဲ့အဖြစ်ပါအဲ့ညက..
ဒါကအဲ့လူကိုယ်တိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြောပြလို့တစ်ယောက်စကားတစ်ယောက်နားမှာဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်တွေလည်းသိခဲ့ရတာပေါ့.. ကိုယ်သာလူချင်းမတွေ့ခဲ့ရတာတော်တော်ကံကောင်းခဲ့တယ်မှတ်…. ဟော်တယ်ပုံစံကိုတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်..သူငယ်ချင်းတို့သွားရင်လည်းသတိထားသွားအုံး ဒါကတော့မှတ်မှတ်ရရကျမရဲ့တခုတည်းသော သရဲခြောက်ခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပေါ့..